Slalom – Mada : norombahin’i Laza ny dingana fahadimy | NewsMada
Slalom – Mada : norombahin’i Laza ny dingana fahadimy
Fandresena faninefany no azon’i Laza. Mbola norombahin’i Laza indray ny dingana fahadimy amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny slalom fiarakodia. Nampitondraina ny anarana “Slalom Tecno d’Atsimondrano” ny hetsika ny faran’ny herinandro teo, teny Tanjombato.
Araka izany, i Laza, avy amin’ny klioba Asa Tana, mitondra ny fiara Peugeot 106 DHL no mitarika vonjimaika amin’ny filaharana ankapobeny. Vitany tao anatin’ny 3: 28.230 ny fifaninanana tamin’izany. Manaraka azy eo amin’ny laharana faharoa i Hugo, avy amin’ny FMMSAM, mitondra ny fiara Peugeot 306, ary namita ny hetsika tao anatin’ny 3: 29.766. Namarana ny laharana telo voalohany amin’ny filaharana ankapobeny koa i Dani, avy amin’ny Asa Tana, mitondra ny fiara Citroën Saxo, namita ny fifaninanana tao anatin’ny 3: 31.970.
Teo amin’ny sokajy vehivavy, norombahin’i Sista, avy amin’ny klioba FMMSAM, mitondra ny fiara WV Polo TDI by Garf, ny voalohany. Vitany tao anatin’ny 4: 11.997 ny fifaninanana.
Ankoatra izay, mbola i Laza hatrany kosa aloha hatreto, no mitarika amin’ny filaharana ankapobeny nasionaly. Eo amin’ny sokajy M10 no misy azy sy Dani raha eo amin’ny sokajy M11 kosa no misy an-dry Hugo.